မတ်စ်လိုး၏ ဆင့်ကဲ လိုအပ်ချက်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
မတ်စ်လိုး၏ ဆင့်ကဲ လိုအပ်ချက်များ
မတ်စ်လိုး၏ ဆင့်ကဲ လိုအပ်ချက်များ (Maslow's hierarchy of needs) ဆိုသည်မှာ စိတ်ပညာဆိုင်ရာ သီအိုရိတစ်ခု ဖြစ်ပြီး အေဘရာဟမ် မတ်စ်လိုး မှ ၁၉၄၃ ခုနှစ်တွင် ရေးသား ထုတ်ဝေသော စာတမ်းတစ်စောင် ဖြစ်သည့် လူတို့၏ စိတ်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာ သီအိုရီ (A Theory of Human Motivation) တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုအကြောင်းအရာကို ချဲ့ထွင်ရေးသားခဲ့ပြီး လူတို့၏ မွေးရာပါ စူးစမ်းလိုမှုကိုပါ ထည့်သွင်း လာခဲ့သည်။ မတ်စ်လိုး၏ သီအိုရီသည် အခြားသော လူတို့၏ စိတ်ပညာ ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆိုင်ရာ သီအိုရီများနှင့် အပြိုင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ မတ်စ်လိုးမှ ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်၊ လုံခြုံမှု၊ အစုအဖွဲ့အတွင်း ပါဝင်ပတ်သက်လိုမှု၊ အချစ်၊ ဂုဏ်သိက္ခာ နှင့် မိမိကိုယ်ကို အကောင်းဆုံး အသုံးချနိုင်မှုတို့ကို လူတို့၏ စိတ်ဆောင်မှုများ တဆင့်ချင်း မြင့်တက်လာကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
မတ်စ်လိုး၏ ဆင့်ကဲ လိုအပ်ချက်များကို ပိရမစ် သဏ္ဌာန် ဖော်ပြထားခြင်း။ အခြေခံ အကျဆုံးသော လိုအပ်ချက်များသည် အောက်ဆုံးတွင် ရှိသည်။
မတ်စ်လိုးမှ အဲလဘတ် အိုင်းစတိုင်း၊ ဂျိမ်းစ်အက်ဒမ်၊ အီလိန်နာ ရုစဗဲ့၊ ဖရက်ဒရစ် ဒေါက်ဂလပ် အစရှိသော ကျော်ကြားသည့် လူများကို လေ့လာခဲ့ပြီး ထိုလူများကို လေ့လာမည့် အစား စိတ်မနှံ့သည့် လူများကို လေ့လာပါက "ထိုသို့ မရင့်ကျက် မကောင်းသည့် မကျန်းမာသည့် လူများကို ဥပမာ အနေနှင့် လေ့လာပါက မကောင်းသည့် စိတ်ပညာ နှင့် မကောင်းသည့် ဒဿနိကဗေဒတို့သာ ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ မတ်စ်လိုးသည် ကောလိပ်ကျောင်းသား များထဲမှ အကျန်းမာဆုံး ကျောင်းသား ၁ ရာခိုင်နှုန်းကို ရွေးထုတ် လေ့လာခဲ့သည်။
မတ်စ်လိုးသည် သူ၏ သီအိုရီကို ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသော စာအုပ်ဖြစ်သည့် "စိတ်ဆောင်မှု နှင့် စရိုက်သဏ္ဌာန်" (Motivation and Personality) စာအုပ်တွင် အပြည့်အစုံ ဖော်ပြခဲ့သည်။
အခြေခံ အကျဆုံးသော အောက်ဆုံး အဆင့် ၄ ဆင့် တွင် မတ်စ်လိုး၏ အဆိုအရ "ချို့တဲ့မှု ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ" (Deficiency Need သို့ D-Need) ပါဝင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းတို့တွင် ဂုဏ်သိက္ခာ၊ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်း နှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ လုံခြုံမှု နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ ပါဝင်သည်။ အခြေခံ အကျဆုံးသော ဇီဝကမ္မ ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ မှ လွဲ၍ အခြားသော ချို့တဲ့မှု ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ မပြည့်စုံပါက လူ၏ ခန္ဓာကိုယ်မှ မည်သို့မှ ထူးခြားမှု မပြသော်လည်း ထိုသို့ မပြည့်စုံမှု အတွက် စိတ်သောက ရောက်မှု၊ စိတ်အတွင်း၌ တင်းမာမှုတို့ ဖြစ်နေမည် ဟု ဆိုသည်။ မတ်စ်လိုး၏ သီအိုရီမှ ဆွေးနွေးပြထားသည်မှာ အခြေခံ အကျဆုံးသော လိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံမှသာလျှင် လူတစ်ယောက် အနေနှင့် အခြားသော လိုအပ်ချက်များကို ရရှိရန် အတွက် ပြင်းထန်သော ဆန္ဒဖြင့် ကြိုးစားလိုစိတ် ရှိမည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ မတ်စ်လိုးမှ မက်တာမိုတီဗေးရှင်း (Metamotivation ) ဟူသော အသုံးအနှုန်းတစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့ပြီး အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံသော လူများသာလျှင် အစဉ်တစိုက် ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် ကြိုးစားလေ့ ရှိသည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မက်တာ မိုတီဗေးရှင်း ရှိသော သူများကို လူဖြစ်ရကျိုးနပ်အောင် လိုအပ်ချက် (Being Need သို B-Need) ဟု ခေါ်လေ့ ရှိသည်။
↑ Maslow's Hierarchy of Needs။ 11 February 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 February 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Maslow၊ Abraham (1954)။ Motivation and Personality။ New York: Harper။ pp. 236။ ISBN 0-06-041987-3။
↑ Mittelman, Willard. "Maslow's Study of Self-Actualization - A Reinterpretation". Journal of Humanistic Psychology 31 (1): 114-135. doi: 10.1177/0022167891311010. Retrieved on 2012-06-03.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မတ်စ်လိုး၏_ဆင့်ကဲ_လိုအပ်ချက်များ&oldid=647934" မှ ရယူရန်
၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။